To Prevent Wrinkle – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
To Prevent Wrinkle
ပါးရတှေနျ့တာ သိပျသကျသာ… ဟောဒီ ၁၀ခကျြ သတိကပျ
အသကျအရှယျကွီးလာသညျနှငျ့အမြှ အရေးအကွောငျးမြား ပျေါလာကွသညျမှာ ဓမ်မတာပငျ။ အရေးအကွောငျးမြားသညျ အိုမငျးခွငျး၏ အမှတျသင်ျကတေဟု သတျမှတျကွသဖွငျ့ ပါးရတှေနျ့ခွငျးကို နှဈသကျသူဟူ၍ မရှိပါပေ။
သို့သျော အောကျပါ အခကျြကလေးမြားကို သတိထားခွငျးဖငျ့ ပါးရတှေနျ့ခွငျး သိသိသာသာ သကျသာစပေါမညျ။
နလေောငျခွငျးသညျ အရေးအကွောငျးပျေါခွငျး၏ အဓိကအကဆြုံးအကွောငျးရငျးပငျ ဖွဈပါသညျ။
၂။ မဖွဈမနေ နရေောငျထ ထှကျရပါက Sun screen လိမျးဖို့ မမပေ့ါနဲ့။
ဆေးလိပျတှငျ ပါဝငျသော အန်တရာယျရှိ ဓာတုပစ်စညျးအခြို့သညျ အရပွေားတငျးရငျးရနျ လိုအပျသော collagen နှငျ့ elastin ကို ဖကျြဆီးသော အငျဇိုငျးမြား ထုတျပါသညျ။ ဆေးလိပျသောကျပါက အရှယျကမြွနျစပေါသညျ။
၄။ အိပျရေး ဝဝအိပျပါ။
အိပျရေးမဝပါက ပိုမိုထှကျသော ကျောတီဆောလျ cortisol သညျ ဆဲလျမြားပကျြစီးစကော အရေးအကွောငျး ဖွဈသညျ။
ပကျလကျအိပျသောအားဖွငျ့ သငျ့အရေးအကွောငျးမြားသညျ ကွှကျသားမြားလြော့ကသြှားခြိနျ၌ ဆှဲဆနျ့ပေးသလိုဖွဈစပွေိး အရေးအကွောငျး ပြောကျစသေညျ။ ဘေးစောငျးအိပျပါက ပါးမို့နှငျ့ မေးစတှေ့ငျ အရေးအကွောငျး ပိုထငျစသေညျ။
၆။ စာဖတျရခကျနလြှေငျ မကျြစိစဈဆေးပါ။
မကျြမှောငျကွုတျ၍ စာဖတျခွငျးသညျလညျး အရေးအကွောငျးဖွဈစသေညျကို မမပေ့ါနှငျ့။
၇။ ဖွညျ့စှကျစာ ပိုစားပါ။
ပဲနို့၊ ခရမျးခဉျြသီး၊ ငါးကွီးဆီ၊ စပဈြစေ့၊ လကျဖကျစိမျး ထှကျကုနျတှဟော အရေးအကွောငျးတှကေို သကျသာစပေါတယျ။ မြားမြားစားဖို့ သတိရနျော။
၈။ ကိုလာအစား ကျောဖီပွောငျးသောကျပါ။
ကိုလာထဲက ပစ်စညျးတှကေ အသားအရကေို နဒေဏျမခံနိုငျ ဖွဈစပေါတယျ။ ကျောဖီကတော့ အဲဒါကို ကာကှယျတယျလေ။ ကျောဖီ ပွောငျးသောကျနျော။
၉။ မကျြနှာခညျြး ကြုံးသဈမနပေဲ ရဓောတျလေး ဖွညျ့ပေးပါ။
လူအမြားစုက anti-agingတှပေဲ သုံးပွီး ရဓောတျဖွညျ့ဖို့ မနေ့ကွေတယျလေ။ Anti-aging တှကေ ကောငျးပါတယျ။ Moisteurizer လေးနဲ့ တှဲသုံးမှ တငျးရငျးပွီး ပိုမိုထိရောကျတာပေါ့။ မကျြနှာခညျြး သဈမနနေဲ့ဦးနျော။ တနျဆေးလှနျဘေး?
၁၀။ ဒီလောကျနဲ့မှ မတိုးတော့ရငျတော့ အရပွေားဆရာဝနျ ပွဖို့ လိုနပေါပွီ။
Botox ကုထုံးယူမလား၊ လဆောပဈမလား၊ ဆေးနဲ့ ခှာခမြလား၊ ခှဲစိတျမှုအသေးလေး ယူမလား။ နညျးလမျးတှေ အမြားကွီး ကနျြပါသေးတယျနျော။ စိတျမညဈပါနဲ့။
အရေးအကွောငျးကငျးပွီး လှပကနျြးမာ စိတျပြိုကိုယျနု နိုငျကွပါစေ…
ပါးရေတွန့်တာ သိပ်သက်သာ… ဟောဒီ ၁၀ချက် သတိကပ်
အသက်အရွယ်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ အရေးအကြောင်းများ ပေါ်လာကြသည်မှာ ဓမ္မတာပင်။ အရေးအကြောင်းများသည် အိုမင်းခြင်း၏ အမှတ်သင်္ကေတဟု သတ်မှတ်ကြသဖြင့် ပါးရေတွန့်ခြင်းကို နှစ်သက်သူဟူ၍ မရှိပါပေ။
သို့သော် အောက်ပါ အချက်ကလေးများကို သတိထားခြင်းဖင့် ပါးရေတွန့်ခြင်း သိသိသာသာ သက်သာစေပါမည်။
နေလောင်ခြင်းသည် အရေးအကြောင်းပေါ်ခြင်း၏ အဓိကအကျဆုံးအကြောင်းရင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
၂။ မဖြစ်မနေ နေရောင်ထ ထွက်ရပါက Sun screen လိမ်းဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
ဆေးလိပ်တွင် ပါဝင်သော အန္တရာယ်ရှိ ဓာတုပစ္စည်းအချို့သည် အရေပြားတင်းရင်းရန် လိုအပ်သော collagen နှင့် elastin ကို ဖျက်ဆီးသော အင်ဇိုင်းများ ထုတ်ပါသည်။ ဆေးလိပ်သောက်ပါက အရွယ်ကျမြန်စေပါသည်။
၄။ အိပ်ရေး ဝဝအိပ်ပါ။
အိပ်ရေးမဝပါက ပိုမိုထွက်သော ကော်တီဆောလ် cortisol သည် ဆဲလ်များပျက်စီးစေကာ အရေးအကြောင်း ဖြစ်သည်။
ပက်လက်အိပ်သောအားဖြင့် သင့်အရေးအကြောင်းများသည် ကြွက်သားများလျော့ကျသွားချိန်၌ ဆွဲဆန့်ပေးသလိုဖြစ်စေပြိး အရေးအကြောင်း ပျောက်စေသည်။ ဘေးစောင်းအိပ်ပါက ပါးမို့နှင့် မေးစေ့တွင် အရေးအကြောင်း ပိုထင်စေသည်။
၆။ စာဖတ်ရခက်နေလျှင် မျက်စိစစ်ဆေးပါ။
မျက်မှောင်ကြုတ်၍ စာဖတ်ခြင်းသည်လည်း အရေးအကြောင်းဖြစ်စေသည်ကို မမေ့ပါနှင့်။
၇။ ဖြည့်စွက်စာ ပိုစားပါ။
ပဲနို့၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ငါးကြီးဆီ၊ စပျစ်စေ့၊ လက်ဖက်စိမ်း ထွက်ကုန်တွေဟာ အရေးအကြောင်းတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ များများစားဖို့ သတိရနော်။
၈။ ကိုလာအစား ကော်ဖီပြောင်းသောက်ပါ။
ကိုလာထဲက ပစ္စည်းတွေက အသားအရေကို နေဒဏ်မခံနိုင် ဖြစ်စေပါတယ်။ ကော်ဖီကတော့ အဲဒါကို ကာကွယ်တယ်လေ။ ကော်ဖီ ပြောင်းသောက်နော်။
၉။ မျက်နှာချည်း ကျုံးသစ်မနေပဲ ရေဓာတ်လေး ဖြည့်ပေးပါ။
လူအများစုက anti-agingတွေပဲ သုံးပြီး ရေဓာတ်ဖြည့်ဖို့ မေ့နေကြတယ်လေ။ Anti-aging တွေက ကောင်းပါတယ်။ Moisteurizer လေးနဲ့ တွဲသုံးမှ တင်းရင်းပြီး ပိုမိုထိရောက်တာပေါ့။ မျက်နှာချည်း သစ်မနေနဲ့ဦးနော်။ တန်ဆေးလွန်ဘေး?
၁၀။ ဒီလောက်နဲ့မှ မတိုးတော့ရင်တော့ အရေပြားဆရာဝန် ပြဖို့ လိုနေပါပြီ။
Botox ကုထုံးယူမလား၊ လေဆာပစ်မလား၊ ဆေးနဲ့ ခွာချမလား၊ ခွဲစိတ်မှုအသေးလေး ယူမလား။ နည်းလမ်းတွေ အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်နော်။ စိတ်မညစ်ပါနဲ့။
အရေးအကြောင်းကင်းပြီး လှပကျန်းမာ စိတ်ပျိုကိုယ်နု နိုင်ကြပါစေ…
Preparation for Due Dates During Thingyan